John Terry oo shaaciyey xiddiga uu rumeysan yahay inuu caawa ku guuleysan doono abaal-marinta xiddiga sanadka ugu fiican Premier League – Gool FM
(England) 28 Abriil 2019. Kabtankii hore ee kooxda Chelsea John Terry ayaa daaha ka rogay ciyaaryahanka uu rumeysan yahay inuu caawa ku guuleysan doono abaal-marinta xiddiga sanadka ugu fiican horyaalka Premier League.
John Terry waxa uu rumeysan yahay in Virgil van Dijk uu boqolkiiba boqol (100%) ku guuleysan doono abaal-marinta xiddigaha sanadka ugu fiican Premier League ee PFA Players’ Player of the Year award taasoo caawa la bixin doono.
Xiddiga jogga dheer ee reer Holland ayaa xasiliyey difaaca kooxda Liverpool tan iyo markii ay 75 milyan oo gini kaga soo qaateen naadiga Southampton bishii Janaayo sanadkii hore ee 2018-kii, waxaana uu gacan ka geystay in kaliya 20 kulan oo Premier League ah ay Reds gool ka ilaashato shabaqeeda xilli ciyaareedkan illaa iyo hadda.
Terry oo ahaa difaacii ugu dambeeyey ee ku guuleysta abaal-marintan xilli ciyaareedkii 2004/05 markaasoo uu Chelsea kula guuleystay horyaalka, isla markaana laga dhaliyey kaliya 15 gool ayaa rumeysan in abaal-marinta caawa uu qaadan doono Van Dijk.
Virgil van Dijk bandhiggiisa wacan ayaa sabab u noqday in Reds kaliya laga dhaliyo xilli ciyareedkan 20 gool, waana tiradii ugu yareed ee kooxaha sare ee Ingiriiska laga dhaliyo, difaacii hore ee Chelsea Terry ayaana rumeysan in ninka reer Holland difaaciisa adag iyo kalsoonidiisa lagu abaal-marin doono caawa.
Terry ayaa u sheegay Jariiradda Times, inuu rumeysan yahay in Van Dijk uu boqolkiiba boqol (100%) uu yahay ku guuleystaha abaal-marintan caawa la bixin doono.
Van Dijk ayaa abaal-marinta xiddiga sanadka ee Premier League waxaa kula tartamaya xiddigo dhowr ah oo uu horboodayo Raheem Sterling oo ka tirsan Man City.